Kwokutangira Kutanga? | Martech Zone
Chipiri, February 24, 2009 Chipiri, Gunyana 7, 2014 Douglas Karr
Kune zvimwe zvakanaka zvisingabviri kutanga kambani muIndiana. Hutungamiri hwevanamuzvinabhizimusi inzvimbo yakasimba yevanhu vanovimbwa uye vanopupurirwa. Ndataura nezveIndiana uye Indianapolis senzvimbo yepamusoro yekambani kutanga bhizinesi. Vanhu vacho vakadzidza chaizvo uye vanoshanda nesimba. Iyo real estate ichiri imwe yemisika yakagadzikana kwazvo munyika yese.
Dai ndaizotanga bhizinesi, Indianapolis ndiyo nzvimbo yandinoda kuve! Zvekutengesa zvivakwa hazvidhuri uye nyika nehurumende dzemuno zvese pro-bhizinesi.
Izvo zvakakwana here kutanga bhizinesi, zvakadaro?
Kutanga bhizinesi kunoda mari. Indiana unayo here?
The 21st Century Fund inotarisa pamabhizimusi emabhizimusi akaratidzira mukana wemusika wekushambadzira matekinoroji matsva.
Vamwe vatsoropodzi vanoti, kunyange hazvo software uye tekinoroji zvinoita kunge zvine basa rakakura, iro bio-tekinoroji iri kukwezva mari zhinji. Chimwe chikonzero chingave chekubatana kwenzvimbo uko bio-tech inayo muYunivhesiti system. Ndinovimba izvi hazvisizvo - ndinotarisira kuti mari iyi iri kuenda kumazano nemukana mukuru.
Kunze kwe 21st Century Fund, hapana zvakawanda zvingasarudzwa. Mari yakazvimiririra ine mukana pane Venture Capitalist mari nekuti inowanzo kuuya netambo shoma dzakabatanidzwa. Nekudaro, yakazvimiririra mari inoenderera ichinyudza mukati mevanamuzvinabhizimusi vemuno avo vakabhadharisa kumwe kutanga ... uye vakabhadhara… uye vakabhadhara mari… uye vakabhadharwa. Zvinoita sekunge munhu wese anoramba achidzokera kune imwechete zvakanaka nekudzokorora.
Nyika yeIndiana ine mabhirionea maviri. Shamwari yakagovana neni nhasi kuti Orange County, California ine mabhirionari masere akakosha kudarika mabhiriyoni makumi maviri nemasere emadhora. Ndiwo musiyano chaiwo, uye zvirokwazvo zvinokanganisa kugona kwekutanga kwenzvimbo kuti uwane mari.
Saka - mubvunzo hausi nguva dzose pane nzvimbo yakanakisa yekutanga yekutanga. Mubvunzo unogona kunge uri kupi kune mari yekubhadhara yako kutanga! Inogona kunge iri nguva yekudyara zvakanyanya mu21st Century fund kana iwe uchishuvira kuchengetedza mabhizimusi ari mupenyu pano munharaunda!
Maitiro Ekutema Yako Blog Traffic muHafu
Feb 24, 2009 at 9:38 PM
Imwe yakanaka sosi ndeye Emerging Innovations Fund kubva kuPurdue.
Kukadzi 24, 2009 na3:10 PM
Wataura zvakanaka Douglas. Enda kune mari. Kune akawanda ekutanga mari ndiko kune vako vanogona kuita investimendi.
Kana iwe uchimhanyisa kambani yeSaaS, unogona kuwana mari muSilicon Valley, Boston, Austin kana Boulder.
Kana iwe uchimhanyisa simba rezuva rekutanga, pamwe Phoenix ingave nzvimbo yakanaka yekuve.
Kana uchinge wasimuka uye uchimhanya uye uine vatengi vanobhadhara, saka zvingave zvakakosha kuvhura hofisi yemuno kune vatengi vako. Ndinofunga Wal Mart inoda kuti vatengesi vavo vave nehofisi yedunhu pedyo nedzimbahwe ravo.
Mar 1, 2009 pa 3: 03 AM
Indiana inotaura nezvechishuwo chayo chekuva nzvimbo yekutanga-inoshamwaridzana. Asi zviito zvacho hazvitsigiri izvi. Iyo 21st Century Fund chidimbu chidiki uye kutanga kwakanaka. Nekudaro, zvimwe zviwanikwa zvakaita semari yemabhizimusi, hutungamiriri hwepamusoro, nezvimwe zvinodiwa zvakare. Ndinovimba zvinhu zvichachinja, asi Indiana inoita seyakanyanya kuchengetedza kuti iite bhizinesi panguva ino. Zvichida mavhiri ari kufamba kuti achinje izvi.
Mar 9, 2009 pa 10: 21 PM
Kune vanhu vazhinji mudunhu reIndiana vanofarira Solar kutanga-ups. Ndiri kuyedza kutsvaga vadyidzani vekutanga kune zvigadzirwa zvezuva. Kim koch